Shirka amniga qaranka oo ka furmay magaalada Baydhabo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShirka amniga qaranka oo ka furmay magaalada Baydhabo
June 4, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Shirka amniga qaranka oo ka furmay magaalada Baydhabo. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Madaxtooyada Puntland]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Shirka amniga qaranka ayaa maanta oo Isniin ah ka furmay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay.
Masuuliyiinta sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa ka qeybgalay shirka.
Shirku inta uu socdo waxaa diirada lagu saari doonaa arrimaha amniga iyo xasilinta dalka. Waa shirkii afraad oo ay yeeshaan Madaxda sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweynayaasha maamul goboleedyada tan iyo sanadkii 2017-kii.
June 4, 2016 Madaxweynaha Puntland oo gaaray Imaaraatka Carabta
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsanaa baarlamaanka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay oo Axad ahayd ku geeriyooday gudaha magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisa. Xildhibaan Siciid Xasan Geedi oo dhawaanahaan xanuunsanaa ayaa ugu dambayn xalay [...]